Ukwamukela abantu abahlukahlukene e-Airbnb
Umphakathi wethu ohlukile womhlaba wonke wenza i-Airbnb yenzeke
Ukwakha inkundla engabandlululi yabo bonke ababungazi nezivakashi ngumgomo wethu omkhulu, futhi sisebenza njalo ukuthuthukisa.
Ukuhlakulela ukwamukela izivakashi okungakhethi
Ababungazi bethu banamandla okuqeda ubandlululo ngokusebenzisa okokuzithokozisa kokuxhumana kwesintu.
Izwe Lokuzizwa Usekhaya
Umphakathi wethu womhlaba wonke awuhluleki ukusimangaza ngezindaba zabo zomusa nokuxhumana. Umkhankaso kwethu we-#OneLessStranger uhlanganyela lezi zikhathi zozwela nokutholakala nezwe.
Amabhuzu Amadala Athengisiwe, Uthando Olusha Lutholiwe
Umphakathi wethu yiwo owenza i-Airbnb yenzeke. Lendaba yothando nokuziqhenya iyisibonelo esiphelele sendlela ababungazi nezivakashi zethu abasishukumisela ngayo ukwakha inkundla engcono yokuvumela ukwamukeleka emhlabeni wonke .
Ukubona ngeso lengqondo Ubunye Bethu
Lolu chungechunge lomfanekiso beluholwa yiqembu lethu le-Black@ Airfinity nabalingani bethu, abayingxenye yomphakathi wethu womhlaba wonke wababungazi nezivakashi, ukuveza izingxoxo mayelana nokubandlululwa ngokobuhlanga kanye ne- #BlackLivesMatter.
Ukuqonda ukucwasa nokuzizwa usekhaya
Enye yezindlela esilwa nobandlululo ngayo ukuqeqesha okungakhethi. Ukusiza amalungu ethu aqonde ubandlululo kanye nokucwaswa okuyimbangela, sakhe leli thuluzi ukuhlola ukucwasa nezinye izici ezithinta izinqumo zabantu, ngisho nangaphandle kolwazi lwawo.
Ukuthatha isinyathelo ndawonye
Isakhamuzi se-Airbnb ikhuthaza intuthuko ngokusebenza kanye nomphakathi wethu womhlaba wonke. Lapha kulapho sabelana ngamathuluzi okufunda nokukhuthaza, imibono evela kubacwaningi abaholayo, izindaba ezisezingeni ukuhlala nezivakashi endlini yakho nezindlela zokuthatha isinyathelo.
Ukusiza ababungazi ukuba bakhe ukuzizwa usekhaya
Ukuqonda okufanayo kubalulekile ekwakheni ukwamukelana nokungabandlululi kokuzithokozisa kwe-Airbnb. I-Help Center yethu eyandisiwe inezimpendulo zemibuzo eminingi zezwe langempela mayelana nomthetho wokungabandlululi.
Sifuna ukuzwa kuwe
Sinogqozi ngokushukumiseleka Kwesigungu sethu Sabanikazi Bezindlu, lapho ababungazi bethu babelana khona izindaba nemibono nabanye, okusijabulisayo futhi kusishukumisele ukuba sakhe inkundla engcono. Yabelana ngokuhlangenwe nakho kwakho kokuxhumana komuntu bese uvula ingxoxo.
I-Airbnb isekela / i-dev / umbala, inhlangano engenzi inzuzo ezinikele ekuthuthukiseni umsebenzi wonjiniyela be-software abamnyama ngokusekela komphakathi.
I-Level Playing Field Institute izinikezele ekwakheni ukwamukela abantu abahlukahlukene ngokuthuthukisa ubumbano, ukulunga kanye nethuba ezindaweni zokusebenza.
Ukubambisana ne-Out for Undergrad, i-Airbnb isebenza ne-LGBTQ yabafundi abangakathweswa iziqu abalungiselela imisebenzi ekukhangiseni, kwezobuchwepheshe, ibhizinisi kanye nobunjiniyela.
Abalingani be-Arc namabhizinisi endawo afana ne-Airbnb azohlinzeka ngemisebenzi yokusekela kanye namathuba emisebenzi kubantu abanokukhubazeka kwentuthuko.
Sisebenzisana ne-UNCF ukusekela abathweswe iziqu zasekolishi abavela ezingeni eliphansi ngoba bonke abaseMelika bafanelwe ukufinyelela okulinganayo kwemfundo.
Ukubambisana kwethu ne-YearUp kulungiselela abantu abadala abathola imali engenayo ephansi emisebenzini yobuchwepheshe nemfundo ephakeme ngokusebenzisa ukuqeqeshwa, okuhlangenwe nakho kanye nokwesekwa.